mihinana! BRUSSELS, misotroa! BORDEAUX dia mampiseho ireo mpahandro an'i Bruxelles amin'ny fetiny fahavalo
Home » Lahatsoratra farany farany » culinary » mihinana! BRUSSELS, misotroa! BORDEAUX dia mampiseho ireo mpahandro an'i Bruxelles amin'ny fetiny fahavalo
Associations News • Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • culinary • Kolontsaina • Hospitality Industry • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • People • fiantsenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Divay & Fanahy
Amin'ny 5, 6, 7 ary 8 septambra 2019, ny fihinanana! BRUSSELS, misotroa! Ny festival BORDEAUX dia haka an'i Bruxelles park indray. Maherin'ny 30 ny mpahandro sy mpanao asa tanana ao Bruxelles no hiasa lavitra amin'ny fatana ao an-dakozia pop-up azy ireo hanolotra ny lohan'izy ireo sonia amin'ny besinimaro. Mpivarotra divay sy mpivarotra divay 50 eo ho eo no hitondra divay maro karazana anao izay maneho ny fahatsorana, ny fahasamihafana, ny kalitao ary ny fahazoana miditra amin'ny divay Bordeaux, manome anao fisotroana tonga lafatra miaraka amin'ny sakafonao sy ny fotoana hahitana zavatra vaovao.
Mihinana ny fahavalo! BRUSSELA, misotroa! miroso amin'ny hetsika i festival ary mandray an-tanana ny chef sy mpanao asa tanana maherin'ny 30 ao Bruxelles. Fotoana mahafinaritra ity hahita ny kintana amin'ny sehatry ny gastrolojia any Belzika amin'ny tontolo maitso ao amin'ny Brussels Park. Amin'ity taona ity, ny bar ny fromazy sy ny efitra dia hanampy indray ny farany amin'ny menio gourmet an'ny festival.
Mpivarotra divay sy mpivarotra divay sahabo ho 40 any Bordeaux ihany koa no ho eo amin'ity hetsika ity ary hitondra anao divay Bordeaux Wines (mena, fotsy, rosés ary crémant) feno tanteraka, izay hiaraka amin'ny lovia nomanin'ireo mpahandro.
Maherin'ny 30 amin'ny chef an'i Bruxelles
Mpahandro sakafo malaza any Bruxelles vaovao no miditra amin'ny fialamboly, midika izany fa mbola hisy bebe kokoa aza ny hankafizinao amin'ny fetibe. Izy ireo dia hanolotra lovia sonia ho an'ny mpitsidika izay mamintina ny mombamomba azy ireo mahandro sakafo.
Ireo mpahandro amin'ny festival:
I Laure Genonceaux dia nanindry tamim-pireharehana ary naneho ny fakany maorisiana tamin'ny alàlan'ny fandohalihana kely tany amin'ny Brinzelle, aubergine ao Maorisy. Na izany aza, ny nahandro azy dia tena frantsay, mamorona ary avo lenta. Laure dia mankalaza ny vokatra eto an-toerana avy amin'ny faritra misy antsika. Rehefa mamorona ny loviany izy dia mifantoka amin'ny fanaovana laharam-pahamehana ny vokatra voajanahary ary ny fanajana ireo mpamokatra.
Le Tournant dia eo afovoan'i Ixelles, eo amoron'ny distrikan'i Matonge. Any i Denis Delcampe dia manomana sakafo mahasarika tsena gourmet, voataonan'ireo nahandro eran-tany. Ny trano fisakafoanana koa dia manosika mafy ny menaky ny divay voajanahary sy ny fifangaroan'ny divay momba ny sakafo.
Ity dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo trano fisakafoanana avo lenta eto an-tanàna. Hatramin'ny nandraisan'ny chef avy any California Alex Joseph ny lakozia tao, Rouge Tomate dia nanomboka namokatra nahandro ankehitriny be pitsiny izay mivoatra hatrany. Alex dia nandresy tamin'ny fifaninanana Benelux 2015 San Pellegrino Young Chef.
Mihoatra noho ny zava-drehetra, dia hazakazaka mahandro sakafo ny Racines. Izy io dia hitondra anao amin'ny dia mankany Italia, izay tena marina sy matsiro ary mahafinaritra. Ity Italia ity dia manana famatsiana vokatra voajanahary premium tsy misy farany. Jereo ity Italie ity ao amin'ireo trano fisakafoanana mpahandro roa, Racines ary Petit Racines.
Yoth Ondara - Club foza
Ity bistro misy haingon-trano indostrialy ity dia nanokatra ny varavarany tao amin'ny distrikan'i Porte de Hal tamin'ny 2015 ary nitondra anao nahandro misy lohahevitra mifototra amin'ny sakafo an-dranomasina, izay avy amin'ny jono maharitra sy tahiry. Isan'andro, ny chef Yoth Ondara, fiaviana Thai, dia mitondra lovia vaovao tsotra sy tsotra miaraka amin'ny fitaomana aziatika ary koa ny mpivady onja-turf, nanolotra fomba mezze hozarainao.
Ao amin'ny foiben'ny orinasan-tserasera PIAS, ity cantine iraisam-pirenena ity dia tsy misy hafa. Nandritra ny famokarana nahandro nohavaozina miaraka amin'ny fitaoman'ny Filipiana, i Glen sy i Julie dia manome lanja lehibe ny vokatra voajanahary ary mikasa ny hitarika ny tsironao.
Nanokatra trano fisakafoanana telo any Bruxelles sy Ghent amin'ny anarana hoe San ny chef manana kintana roa sosona Michelin. Ny chef Valerio Borriero dia mitantana ny trano fisakafoanana Sablon, mitondra lovia hafahafa ho anao, araka ny antenainao.
Ao amin'ny villa voatanisa tamin'ny taona 1930, Alessio Sanchez dia mitondra anao sakafo Japoney "bistronomic", aingam-panahy avy amin'ny fifangaroan'ny tsiro natoraly marani-tsaina avy amin'ny vokatra Peroviana sy ny teknikan'ny fahandroana Japoney.
La Truffe Noire dia faly tamin'ny mpitia sakafo matsiro efa ho 30 taona, miaraka amin'ireo truffles miavaka no misongadina indrindra. Na manana mainty, fotsy na fahavaratra ianao, dia lava ny truffles tompoin'i Luigi Ciciriello amin'ity trano tsara tarehy akaikin'i la Cambre ity. Ity trano fisakafoanana ity, izay mifantoka amin'ity majika mahery sy mahery ity ary singa miavaka, mampanantena hanome anao traikefa tsy hay hadinoina miaraka amin'ity diamondra gastronomika ity eo amin'ny lohalaharana.
Karen Torosyan - trano fisakafoanana BOZAR
Manompo pie toa an'i Pâté en croûte, pie, Pithivier ary Coulibiac, ny trano fisakafoanana Bozar dia tontolo nofinofy ary tena mampiavaka ny maha-izy an'i Bozar. Ny tontolon'ny trano fisakafoanana art-deco dia mahatonga azy io ho oasis ny nahandro be pitsiny nomanin'i Karen Torosyan, mpahandro mpanakanto mafana fo miaraka amina kintan'i Michelin eo ambanin'ny fehikibony.
Jean Philippe Watteyne - Ny 1040
Nanapa-kevitra i Jean-Philippe Watteyne fa hanangana ny trano fisakafoanana ao amin'ny hotely Sofitel Brussels Europe manomboka ny volana Mey. Eto, ity chef avy any Mons ity dia mitondra anao sakafo mahaliana ao amin'ny brasserie vaovao 1040. Raha mankafy tsiro mahafinaritra ianao dia tsy maintsy mijanona eto!
Tsy misy clientèle lafo vidy eto, Belzika, Bruxelles ary vahoaka iraisampirenena izay mankasitraka tsiro sy tia mankaleo fotsiny. Ny mpahandro sakafo Cédric Callenaere dia miaina fiainana vaovao ho an'ny sakaizan'ity andrim-panjakana ity, miaraka amina lovia mahafinaritra sy mahafinaritra indrindra!
Fernand Obb - Delicatessen dia manolotra ny tenany ho "takelaka fisakafoanana malaza". Cédric Mosbeux, teratany Bruxelles, dia niainga hitondra ny foto-tsakafon'ny sakafo belza amin'ny taonjato faha-21. Niakatra ny fanamby izy satria afaka nirehareha fa nandresy tamin'ny fifaninanana voalohany hahitana croquette makamba tsara indrindra any Bruxelles.
Ny torolàlana Gault & Millau andiany 2018 dia nanolotra ny loka ho an'ny chef tanora tsara indrindra amin'ny taona ho an'i Kenzo Nakata avy amin'ny trano fisakafoanana Gramm, ary mazava ny antony! Io trano fisakafoanana io, hita ao amin'ny Rue de Flandre 86, sy ny sakafo matsiro azy no nahatonga ny olona rehetra hiteny.
Ao amin'ny Gus, azonao atao ny mahita fifangaroana miavaka amin'ny zavakanto fanaovana labiera sy gastrolojia. Ao anaty toerana milamina sy milamina dia afaka mankafy karazana labiera vaovao ianao, vita amin'ny labiera avy amin'ny Aurélien Grodent. Ny nahandro nomanin'i Pierre Baeyens sy Jonathan Delhière, izay samy nitantana ny Bon Bon sy ny Air du Temps tsirairay avy, dia misy lovia avy amin'ny bistro. Tsy maintsy mijanona eto amin'ity trano fisakafoanana ity ianao.
Rehefa afaka folo taona mahery nifaly tamin'ny finamanananay teo ambanin'ny chef Sang Hoon Degeimbre kintana misy kintana Michelin (L'air du temps, SAN), nanokatra trano fisakafoanana azy manokana i Toshiro Fujii. Eto ianao dia afaka mankafy sakafo mamorona izay mifantoka amin'ny fiaviany Japoney ao anaty toerana marevaka.
Ny nahandroan'i Isabelle Arpin dia tsy manaraka ny lamaody ary tsy voafehin'ny fironana. Na izany aza, amin'ny fotoana iray ihany, dia miavaka sy gourmet koa izy io araka izay azo atao. Ny chef dia miasa mifototra amin'ny fitsipiky ny tsy lisitra lovia amin'ny menus-ny, midika izany fa afaka mamorona izy rehefa tonga ny fotoana mahandro.
KAMO dia mitondra anao ny tsara indrindra any Japon amin'ny loviao. Ity trano fisakafoanana ity dia manana nahandro Japoney sy ireo takiana aminy no lohalaharana ao an-tsainy, ary ny laharam-pahamehana mitondra anao vokatra vanim-potoana sy avo lenta. Ao amin'ny KAMO dia ahitanao an'i Japon, ny zavakanto ary ny fahaizany.
Simona El Harar - lakozia 151
Any amin'ny distrikan'i Ixelles, ao anatin'ny dingana vitsivitsy monja, ny Kitchen 151 dia mampita anao amin'ny araben'i Bruxelles ka hatrany afovoan'ny atsinanana sy atsimon'ny morontsirak'i Mediterane. Hahafinaritra anao ny miaina fisakafoanana izay mankalaza ny sakafo fusion maoderina sy ny kolontsaina mahandro mahandro any Moyen Orient sy Maghreb.
Chef Kevin Lejeune sy Virginie Essers no lohalaharana amin'ity trano fisakafoanana angano ity ary mitondra anao mahandro matsiro sy be pitsiny. La Canne en Ville dia nijanona ho mahatoky hatrany amin'ny fitsipi-pifehezana ao an-toerana. Isaky ny maraina dia niainga ny chef sy ny ekipany hamorona menio maoderina sy gourmet ary maivana vaovao ho an'ny andro.
Ao amin'ny Les Brigittines, ianao no vahinin'i Dirk Myny, chef-ny. Hahafinaritra anao ny misakafo hariva ao amin'ny paositry ny kanto nouveau taloha izay mirehareha amina am-patana lehibe. Eto i Dirk Miny dia nanaiky tamim-pahatsorana ny sakafo nahandro, fa io no lozisialy vanim-potoana sy gourmet, izay mifantoka amin'ny vokatra eto an-toerana ary misy ampahany malala-tanana. Mandritra ny sakafo atoandro dia hampiharihary ny fahafinaretana amin'ny sakafo iray manontolo sy mihabe ny eo an-toerana i Dirk Miny.
Ixelles dia tranon'i Les Caves d'Alex, ao anaty toerana tsy mampino miaraka amina barika mahatalanjona ao amin'ny efitrano misy rivo-piainana akaiky. Na izany aza, ambonin'izany rehetra izany, ny kilasika frantsay an'ny kafe any Les Caves d'Alex, miaraka amina hena matotra dia mampiorina ny lazan'ity trano fisakafoanana ity ivelan'i Bruxelles. Mora jerena amin'ny maso ity trano fisakafoanana ity ary hahafaly anao ny safebuds!
Nanangana trano fisakafoanana gourmet tao amin'ny tanàna kelin'i Euzet-les-Bains i Karin Burton, nanapa-kevitra ny handao ny tanindrazany malalany atsimo mba hankany Belzika ary hanangana toerana vaovao. Saingy, tsy tonga maina teto izy, satria nitondra ny tsirony rehetra tao Camargue sy Provence. Ny fizaran-taona any atsimo dia misy akony lehibe amin'ny menio, miaraka amin'ny anarana izay mahatonga anao hieritreritra ny masoandro. Ny fidirana amin'ny varavaran'ny Lou Ferri dia sahala amin'ny fitsangatsanganana 1,000 km amin'ny ampahan'ny segondra.
Tannour dia mofo niavian'ny Syriana. Tsy mahagaga noho izany raha ity trano fisakafoanana haingam-pandeha ity izay natsipy vato avy tao amin'ny Place Flagey no anarany, satria azonao jerena ilay chef, Georges Baghdi Sar, manamboatra azy eo alohanao eo. Ity trano fisakafoanana ity dia mitondra vokatra tsara kalitao ary mitondra anao amin'ny dia mahafinaritra amin'ny vava vitsivitsy monja.
Alang Wichaiphum - Tovolahy taloha
Ilay trano fisakafoanana aziatika Old Boy, any Ixelles, dia avy amin'ny fitiavan'ny mpanorina ny tsiro sy ny tsiro an'i Azia. Ny chef Alang Wichaiphum dia mitondra anao lovia sinoa sy thailand, izay hahafaly ny safebuds anao noho ny vokatra vaovao sy vanim-potoana ampiasaina hanamboarana azy ireo.
Vao 27 taona i Paul Delrez dia efa manana trano fisakafoanana roa any Bruxelles. La guinguette en ville dia mahatsapa ho toy ny fisakafoanana kely eo an-toerana izay ahafahanao mijanona ary mankafy ny fisakafoanana gourmet mahafinaritra. Ny chef tanora dia manomana nahandro izay manondro ny satrony amin'ny kolontsaina bistro, miaraka amin'ny lovia gourmet sy ny fiovaovan'ny vanim-potoana.
Olivier Vanklemput sy ny chef sous-chef azy dia manamboatra lovia mahazatra any Bruxelles sy ny fomba fahandro mamorona izay mampiavaka azy io.
Kaontera fisakafoanana sy fisotroana fromazy
Mpahandro mofomamy malaza maro no hiasa isan'andro mba hanampy ny famitana farany amin'ny menio ao amin'ny festival. Ianareo izay manana nify mamy dia afaka mankafy efitra an'efitra mahafinaritra misy vidiny 9 euro. Ireo mpanamboatra divay sy mpivarotra bordeaux dia ho faly hanome anao torohevitra momba ny divay tena handeha amin'ny tany efitra.
Ireo mpahandro mofomamy:
Taorian'ny filalaovany kintana tamin'ny Villa Lorraine ary avy eo ny trano fisakafoanana Bouchéry sy Notos, Nikolas Koulepis dia nanokatra ny patisserie nomen'ny grika azy tao amin'ny Rue du Page. Walnuts, pistachios ary kanelina dia misongadina be amin'ireo mofomamy artisanaly maivana sy be pitsiny ireo, ary ny fofon'ny pastry Viennese vao namboarina dia mameno ity patisserie mahafinaritra ity.
"Ny lozabe sy ny fahombiazan'ny Rui Garcia dia tsy kisendrasendra. Tonga tany Belzika tokoa ity chef Portiogey ity niaraka tamin'ny fahaizany sy ny tsiambaratelo momba ny fahandro avy any amin'ny firenena niaviany.
Hatramin'ny nanokafana azy dia lasa benchmark eto an-drenivohitra i Garcia patisserie. Eto, tsy ny staple 'pastel de nata' ihany no ho hitanao, fa koa pastry isan-karazany amin'ny paortiogey isam-paritra. ” Anaïs Gaudemer - Fahafahana
Anaïs Gaudemer, izay zaridaina zaridaina ary efa adala tamin'ny pastry hatramin'ny mbola kely, dia ao ambadik'io fivarotana mofomamy miavaka io. Ny Cokoa dia aingam-panahy avy amin'ny natiora ho toy ny fototry ny famoronana mofomamy vaovao sy manavao, izay noforonina nifototra tamin'ny vanim-potoana sy ny tsindrim-peo avy amin'ny mpamorona Anaïs Gaudemer. Tongava ary hahita vokatra marobe izay mitovy amin'ny matsiro maro loko ihany koa.
Yasushi Sasaki, mpianatra taloha an'ny mpahandro mofomamy malaza Mahieu ao Stockel ary nisongadina ao amin'ny torolàlana 4 amin'ny Gault et Millau Chocolate and Pastries mpitantana tamin'ny 2015, dia mitondra anao mamy mankasitraka Japoney misy siramamy ambany. Ity chef gourmet ity dia mamorona tsiro mahafinaritra sy mahataitra ny olona amin'ny fihirifany vaovao amin'ny klasika patisserie.
Tsy misy tsara kokoa noho ny mankafy fromazy isan-karazany natolotra tamin'ny divay Bordeaux tena tsara. Maninona raha manana fromazy manga misy divay mamy? Amin'ity taona ity, mpanangona cheesem-be malaza be dia be no hihinana! BRUSSELS, misotroa! BORDEAUX, manome ny mpitsidika ny fahitana tsiro vaovao noho ny fisafidianana tany am-boalohany.
Ireo mpivarotra fromazy:
Julien Hazard dia mpanamboatra fromazy voamarina ary manam-pahaizana matotra izay manome ny fromazy amin'ny ankamaroan'ny trano fisakafoanana gourmet any Bruxelles. Amin'ny sakafo! BRUSSELS, misotroa! BORDEAUX, manana karazana fromazy mihoatra ny roanjato mahery izy. Ny ankamaroan'izy ireo dia efa matotra tsara ao amin'ny lakaly fivarotany ao amin'ny Rue Vanderkindere.
Voahosotra ho tompon-tany Cheesemaker Belza 2016 tamin'ny taona, i Véronique Socié no vehivavy faharoa nahazo ity loka ity ary voalohany nanokatra fisotroana fromazy tao an-drenivohitr'i Belzika. Ity masoivoho amin'ny asa-tanany ity dia mamokatra fromazy osy avy amin'ny faritra Jura ary mametraka latabatra d'hôte ao amin'ny fivarotany, izay hahitanao ny safidin'ny fromazy tiany indrindra.
Raharaham-pianakaviana i Le Comptoir du Samson. Ireo rahavavy roa, Hélène sy Lara Milan, izay liana amin'ny vokatra belza ao an-toerana, miaraka amin'ny dadatoany, Vincent Verleyen, izay nahazo ny loka Cheesemaker of the Year of the Year 2014, mitondra anao ireo fromazy vita amin'ny ronono manta tao ny Condroz any Namur mampiasa fomba nentim-paharazana, ary ireo dia voamarika ho vokatra biolojika.
Etienne Boissy- Avy amin'ny Comptoir
Taorian'ny asany tao amin'ny serivisy fisakafoanana izay nahitana 10 taona naha-Profesora momba ny latabatra tao amin'ny Ivontoerana Paul Bocuse, dia nahazo ny loka ho an'ny “Cheesemaker tsara indrindra any Frantsa” i Etienne Boissy tamin'ny 2003-2004. Hatramin'ity fahombiazana ity dia nanome hatrany ireo mpanjifany vokatra avo lenta indrindra i Etienne Boissy. Tsy tokony halainao mihitsy io kaontera io.
Ankafizo ny divay Bordeaux araka izay tianao
Bordeaux Wines, izay mpiara-miombon'antoka lehibe amin'ity festival ity, dia nanatevin-daharana anay indray tamin'ity haitao mahandro ity. Ny festival dia fotoana tsy manam-paharoa hahita ny kalitaon'ny divay Bordeaux ary hihaona amin'ireo mpanao divay sy mpivarotra divay 50 eo ho eo izay hizara ny fitiavany amin'ny fomba sariaka sy milamina.
Esory ny tantara sy ny anecdotes an'ireto lehilahy sy vehivavy manao divay Bordeaux ireto. Ireny divay azo idirana ireny, izay mora sotroina, dia vitaina amin'ny fampifangaroana tsara ireo karazana voaloboka maromaro ary hahafaly ny mpitsidika ny fitsidihan'ny mpitsidika. Ity dia fotoana tsy manam-paharoa hahitana mena vaovao sy tanora Bordeaux mena, fotsy maina, rosés, clairet ary vatomamy, izay manao aperitifa mahafinaritra sy mandeha amin'ny karazan-tsakafo rehetra. Ny mpivady divay, izay natambatra ho an'ny hetsika, dia hatao ho an'ny lovia, ny efitra ary ny lovia ny fromazy ao amin'ny festival.